Beesha degta degmada Ceeldheer oo ka hortimid qaabka loo dhisayo maamulka Gobolada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay waxgaradka, dhalinyarada, aqoonyahanada, siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee beesha Waceysle Abgaal oo ka mid ah beelaha dega gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya, waxaana kulankaas lagu dhaliilay qaabka maamul u sameynta gobollada Galguduud iyo Mudug oo ay waddo dowladda Soomaaliya.
Caaqil C/llaahi Cali Taakow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in beeshu ay deegaanno balaaran ka degto gobollada Mudug iyo Galgaduud, isla markaana aan maamulkaas la dhisayo waxba laga weydiin beeshiisa.
Wuxuu sheegay Caaqil Taakow in xitaa hal xubin aysan beesha Waceysle ku lahayn xubnaha toddobada ah ee saxiixay heshiiska lagu dhisayo maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya.
“Waxaan caddeynayaa in shirkan uusan ahayn mid dowladda Soomaaliya lagu mucaaradayo ama dad gooni ah lagu xumeynayo, balse uu yahay mid ay ku doonayno inaan ku muujinno mowqifkeenna ku aaddan maamulka labadaan gobol loo sameynayo.” ayuu yiri caaqil C/llaahi Cali.
Siyaasiga C/llaahi Geeddi Shadoor oo xildhibaan kazoo noqday baarlamaanka Soomaaliya oo isna ka hadlay kulanka ayaa xusay in beesha Waceysle aysana aqbalayn in la duud-siiyo xuquuqdeeda, dhinaca kalena aysan rabin in la siiyo xuquuq ay dad kale leeyihiin.
“Dowladda Soomaaliya ee arrintan garwadeenka ka ah waxaan ka rabnaa cadaalad, waxaan ka sugaynaa inay ilaaliso habka saami qaybsiga beelaha, nala-tashato, arrimahaanna mid kalsooni looga qabo ay noqoto,” ayuu yiri C/llaahi Geeddi.
Wuxuu soo jeediyey C/llaahi Geeddi Shadoor iney haboontahay in maamul maamul sameynta gobolada Dhexe laga horumariyo dib u heshiisiinta dadka halkaas wada dega.
Sidoo kale, Suldaan Ciise Macalin Maxamuud oo ka mid ah odayaashii wax kasoo xulay xildhibaannada baarlamaanka ayaa gabagabadii kulanka ka sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin dowladda Soomaaliya, balse ay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan wixii ay tabanayaan si ay qaab calool fayoobi leh wax ula qaybsadaan beelaha kale ee Soomaaliyeed.
Goobta ayaa laga akhriyay qoraal kasoo baxay kulanka oo ay beeshu ku caddeynayso mowqifkeeda ku aaddan waxay ka qabto maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Qoraalka goobta laga akhriyey ayaa waxaa lagu sheegay ineysan jirin sabab keeni karta in beesha Waceysle la hoos geeyo maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya, iyadoo aan wax talo laga weydiin.
Qoraalka waxaa warbaahinta u akhriyey Cumar Cali Shaambi, wuxuuna u qornaa sidatan:-
Beesha Waceysle e Abgaal ayaa dega degmooyinka Ceeldheer iyo Galcad oo ka tirsan Galgaduud, sidoo kale waxey degaan degmada Xarar-dheere oo ka tirsan gobolka Mudug.